प्लास्टिकको प्रयोगले वातावरणमा पर्ने हानिकारक प्रभाव
– राम ठकुरी हाम्रो दैनिक जीवनमा प्लास्टिकवाट बनेको सामाग्रीको प्रयोग धेरैनै हुने गर्द्छ । हामिलाइ थाह छ कि प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग कम गर्नु पर्छ भनेर। प्लास्टिकको झोला कसरी हानिकारक हुन जान्छ त भनेर यहाँ प्रकाश पार्न खोजिएको छ। प्लास्टिकलाई रासायनिक भाषामा पोलिइथिन (Polythene) भनिन्छ किनकी यो असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन इथिन लाई रासायनिक प्रतिक्रया गरि पोलिमर (Polymer) मा रूपान्तर गरि […]
मानसिक रोग उपचारमा नयाँ प्रबिधिको बिकास
– राम ठकुरी मानिस तथा पशुहरूमा मानसिक असन्तुलनका कारण देखापर्न सक्ने विभिन्न रोगहरूलाई मानसिक रोग भनिन्छ। मानसिक स्थिति खराब अथवा कमजोर भएमा मानिस तथा पशुहरू बौलाउने पनि गर्दछन्। मनलाई वसमा राख्न नसक्दा, मस्तिष्कमा कुनै पनि बाहिरि अथवा भित्री चोट पर्न गएर, बढी चिन्ता, हैरानि, सरुवा रोग जस्तै रेबिज आदीको कारणले मानसिक रोग उत्पन्न हुन्छ । आजको भाग दौड […]
कृष्ण छिद्र ( Black Hole) भनेको के हो ? यसले कसरी असर गर्दछ ?
यदि तपाई विज्ञानसंग सम्वन्धित व्यक्ति हो भने पक्कैपनि Black Hole को बारेमा जानकारी हुनुहुन्छ होला । तर जानकारी नभएपनि आउनुहोस् Black Hole को बारेमा जानकारी हासिल गरौँ । व्रम्हाण्डको चमत्कारपूर्ण गुरुत्वाकर्षण शक्ति भएको अन्धकारमय अदृश्य भागलाई Black Hole भनिन्छ । यसले जस्तोसुकै वस्तुलाई पनि कुनै अस्तित्व बाँकी नराखी बेपत्ता पारिदिन सक्छ । प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरू अल्वर्ट […]
भनिन्छ आवश्यकता आविष्कारको जननी हो । तर सुतेको सिहको मुखमा मृग आफै आएर पस्ने त होईन । वि.स. २०२१ सालतिर वरिष्ठ जलस्रोतविद डा. हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधी सोधपत्रमा नेपालको सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता ८३००० मेगावाट रहेको तथ्य बाहिर ल्याए । नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि पर्याप्त रूपमा यसको उपयोग हुन सकेको छैन । आर्थिक रूपले उत्पादन […]
हिन्दु, बौद्ध र जैन परम्परा अन्तर्गत हामीले अपनाउदै आएको धेरै संस्कारहरु वैज्ञानिक दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि अत्यन्तै ठिक छन्। जस्तै: व्रत बस्दा नुहाउने चलन सफा र स्वस्थ शरीरको लागि राम्रो मानिन्छ। बिहान मन्त्र पढ्दा मन एकाग्र भई मस्तिष्क सबल हुने हुन्छ। पुजा गर्दाको शंखको आवाजको तरङ्गले कतिपय किटाणुहरु नष्ट हुने हुन्छ। शंख, घण्ट र अन्य बाजा बजाउँदा निस्कने […]
पृथ्वीमा प्राकृतिक रुपमा मानव र अन्य जीवको मृत्युु सामान्य रूपमा हुने प्रक्रियामा त हामी अनभिज्ञ छैनौं ।तर छोटो समय भित्रै मानव जातिको अत्यन्तै ठुलो संख्यामा बिनास हुन सक्ने सम्भावित कारण बारे यहाँहरुले विचार गर्नु भएको छ ? जान्नुहोस केही संभावित भयानक कारणहरु, १.प्राकृतिक प्रकोप प्रकृतिमा अचानक आइपर्ने विध्वंसकारी घटनाहरु जस्तै भुकम्प , बाढी , पहिरो […]